I-Disney ithembisa ukuba iqonga layo liya kubiza kancinci kuneNetflix | Iindaba zeGajethi
I-Disney ibhengeze ukuba izakushiya iNetflix kungekudala (ESpain, enyanisweni, ubukho babo bubungqina nje kuba amalungelo agutyungelwe ngomnye umvelisi). Le yindlela isigebenga sokonwabisa silumkise ukuba ngoku siceba ukuseta iqonga laso lokonwaba lomxholo kwimfuno, okwangoku besilandela iindaba nganye ngalo mbandela.
Namhlanje i-CEO yangoku ikwazisile ngeendaba nje ezibalulekileyo, iqonga lomxholo elifunwayo liya kuba litshiphu kuneNetflix. Kuyathakazelisa ukuba olu lwazi luvela kwiiveki ezimbalwa emva kokuba iNetflix inyuse ngokusesikweni iindleko zenkonzo yayo kwamanye amazwe, kubandakanya iSpain, ngaphandle kwenyani yokuba ukunyuka bekuphantsi kakhulu.
Nangona kunjalo, asikazisunguli iirokethi okwangoku, nto leyo isengqiqweni ukuba sijonga ukuba okwangoku iDisney ayinabenzi bayo bakamabonakude, ngelixa INetflix inomxholo womgangatho onje Umtya ongaqhelekanga y Indlu yeeCards ezitsala izigidi zabasebenzisi kwiqonga layo, kunye nomxholo omninzi ovela kwezinye iifemu. Ngelixa kubonakala ngathi iDisney okwangoku kuya kufuneka ibambelele kumxholo ohleli kumalungelo ayo. Ukuqhekeka kweenkonzo ezifunwayo kubangela umonakalo kwiipokotho zabasebenzisi.
Isicwangciso sethu ngamaxabiso asezantsi kakhulu kweendleko zangoku zokubhaliselwa kweNetflix, injongo yethu apha kukuba sibe ngumdlali osebenzayo kwindawo ethe ngqo-kubathengi, indawo esaziyo sonke ukuba yindawo entle kakhulu.
Sikholelwa ukuba iimveliso zethu kunye neefranchise zethu zibalulekile, njengoko sibonile kwiNetflix kunye nawo onke amanye amaqonga.
Kuya kufuneka uhlawule i-HBO kuba ufuna ukubona Umdlalo weTrone, ngelixa ukubona Izinto angamazi Kuya kufuneka ungene kwibhokisi yeNetflix kunzima, kwaye ngoku ijoyina iDisney, engazukuthatha oyena mncinci endlwini, kuba inamalungelo phakathi kweminye imveliso yabantu abadala, akukho nto ingako kwaye akukho nto ingaphantsi Idabi leenkwenkwezi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Disney ithembisa ukuba iqonga layo liya kubiza kancinci kuneNetflix
Abaphandi bafumanisa uhlobo olutsha lwe-fusion yenyukliya ukuya kumaxesha angama-10 anamandla ngakumbi